အလုပ်လုပ်ဖို့ ရန်ကုန်တက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူယောင်္ကျားလေးမှ အလုပ်တွင် ဝန်ထမ်းခေါ်နေတယ်ဟုပြောကာ…. See more – Messi Club
အလုပ်လုပ်ဖို့ ရန်ကုန်တက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူယောင်္ကျားလေးမှ အလုပ်တွင် ဝန်ထမ်းခေါ်နေတယ်ဟုပြောကာ…. See more
ဟင်္သတတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာအထူးပြုနဲ့ တက်ရောက်နေတဲ့ သူမဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ အလုပ်လုပ်လိုတာကြောင့် မိဘတွေက သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒကို ခွင့်ပြုပြီး အလုပ်ရှာခွင့်ပြုခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။မြန်အောင်မြို့ကနေ ရန်ကုန်ကိုသူမထွက်လာခဲ့တာပါ ။
ရန်ကုန် လှိုင်သာယာကအဆောင်မှာ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ အတူနေထိုင်စဉ်မှာအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝက ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မျိုးမြတ်အောင်ဆိုသူက သူလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်မှာ လူလိုနေတာကြောင့် အလုပ်ရှင်နဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုပြီးယမန်နေ့ညက သူမတစ်ဦးတည်းကို လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ည၈နာရီထိုးတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူပြန်မလာသေးလို့ အတူနေသူငယ်ချင်းမိန်းကလေးက ဖုန်းဆက်ခဲ့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရတော့တဲ့အတွက် နောက်တစ်နေ့မှာ မိဘတွေဆီ အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဖြစ်သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးနောက်ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးသောင်းညွှန့်က မြန်အောင်ကနေ ရန်ကုန်ကို ညီဖြစ်သူနဲ့အတူ လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ချက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လူပျောက်မှုနဲ့ တိုင်တဲ့အခါမှာ ရဲစခန်းမှ မျက်မြင်သက်သေရှိလားမေးတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဒီလူခေါ်သွားပါတယ်ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံနဲ့ ပြခဲ့ပါတယ်။ထွက်သွားတဲ့ သမီးရဲ့ အင်္ကျီကိုလည်း ဓါတ်ပုံနဲ့ ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရဲစခန်းက မယုံဘူး။ဘာလို့မယုံတာလည်းဆိုတော့ အသက် ၂၀ကျော်နေပြီ ရည်းစားနဲ့ သွားပြီးတွေ့ချင်လည်းတွေ့မယ် ၊
လင်နောက်လိုက်သွားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် လို့ပြောပြီး အမှုက ကြန့်ကြာနေခဲ့တယ်လို့ ပျောက်ဆုံးသူရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။နောက်နေ့မှာရထားသံလမ်းဘေးမှာ အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေက တောင်ဥက္ကလာပမြိုကနယ်အတွင်း ပါရမီဘူတာနဲ့ ကံဘဲ့ ဘူတာအကြား ရထားသံလမ်းဘေးမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလောင်းကို စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအလောင်းကိုတောင်ဥက္ကလာပ ရဲတပ်ဖွဲ့က စံပြဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအလောင်းတွေကတယ်ကြားတော့ ဦးသောင်းညွန့်တစ်ယောက် စံပြဆေးရုံကို လိုက်သွားခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူ ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဝတ်အစားနဲ့ သူရဲ့ ခြေလက်အင်္ဂါလေးတွေ ကြည့်ပြီးသမီးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ အဲဒီတော့မှ သေတယ်ဆိုတာ တစ်ထစ်ချသိရတာပါ လို့ ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်လို တစ်နယ်တခြားမှာ တူမဖြစ်သူအသတ်ခံရမှုအတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အစစအရာရာအခက်အခဲ ရှိတဲ့အပြင် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လိုတာကြောင့် ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးမင်းလွင်က သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ ပင်လုံသွေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြည်သူ့အရေးဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲကကို ချိတ်ဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူမသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ လှိုင်သာယာရဲစခန်းက လူပျောက်မှု ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှု တွေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါပြီ။
အလုပျလုပျဖို့ ရနျကုနျတကျလာတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးကို သူငယျခငျြးဖွဈသူယောင်ျကြားလေးမှ အလုပျတှငျ ဝနျထမျးချေါနတေယျဟုပွောကာ…. See more
ဟင်ျသတတက်ကသိုလျမှာ မွနျမာစာအထူးပွုနဲ့ တကျရောကျနတေဲ့ သူမဟာ ရနျကုနျမွို့မှာ အလုပျလုပျလိုတာကွောငျ့ မိဘတှကေ သမီးဖွဈသူရဲ့ ဆန်ဒကို ခှငျ့ပွုပွီး အလုပျရှာခှငျ့ပွုခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။မွနျအောငျမွို့ကနေ ရနျကုနျကိုသူမထှကျလာခဲ့တာပါ ။
ရနျကုနျ လှိုငျသာယာကအဆောငျမှာ သူငယျခငျြးမိနျးကလေးတဈဦးနဲ့ အတူနထေိုငျစဉျမှာအထကျတနျးကြောငျးသူဘဝက ငယျသူငယျခငျြးဖွဈသူ မြိုးမွတျအောငျဆိုသူက သူလကျရှိလုပျကိုငျနတေဲ့အလုပျမှာ လူလိုနတောကွောငျ့ အလုပျရှငျနဲ့တှပေ့ေးမယျဆိုပွီးယမနျနညေ့က သူမတဈဦးတညျးကို လာရောကျချေါဆောငျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ည၈နာရီထိုးတဲ့အခါ သူငယျခငျြးဖွဈသူပွနျမလာသေးလို့ အတူနသေူငယျခငျြးမိနျးကလေးက ဖုနျးဆကျခဲ့ပမေယျ့ အဆကျအသှယျမရတော့တဲ့အတှကျ နောကျတဈနမှေ့ာ မိဘတှဆေီ အကွောငျးကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သမီးဖွဈသူနဲ့ အဆကျအသှယျပွတျသှားပွီးနောကျဖခငျဖွဈသူ ဦးသောငျးညှနျ့က မွနျအောငျကနေ ရနျကုနျကို ညီဖွဈသူနဲ့အတူ လိုကျလာခဲ့ပါတယျ။ရဲစခနျးမှာ လူပြောကျတိုငျခကျြဖှငျ့လှဈခဲ့ပါတယျ။လူပြောကျမှုနဲ့ တိုငျတဲ့အခါမှာ ရဲစခနျးမှ မကျြမွငျသကျသရှေိလားမေးတဲ့ အခါ သူငယျခငျြးဖွဈသူက ဒီလူချေါသှားပါတယျဆိုပွီး ဓါတျပုံနဲ့ ပွခဲ့ပါတယျ။ထှကျသှားတဲ့ သမီးရဲ့ အင်ျကြီကိုလညျး ဓါတျပုံနဲ့ ပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရဲစခနျးက မယုံဘူး။ဘာလို့မယုံတာလညျးဆိုတော့ အသကျ ၂၀ကြျောနပွေီ ရညျးစားနဲ့ သှားပွီးတှခေ့ငျြလညျးတှမေ့ယျ ၊ လငျနောကျလိုကျသှားတာလညျးဖွဈခငျြဖွဈမယျ လို့ပွောပွီး အမှုက ကွနျ့ကွာနခေဲ့တယျလို့ ပြောကျဆုံးသူရဲ့ ဦးလေးဖွဈသူက ပွောပါတယျ။နောကျနမှေ့ာရထားသံလမျးဘေးမှာ အမှိုကျကောကျနတေဲ့ ကလေးငယျတှကေ တောငျဥက်ကလာပမွိုကနယျအတှငျး ပါရမီဘူတာနဲ့ ကံဘဲ့ ဘူတာအကွား ရထားသံလမျးဘေးမှာ အမြိုးသမီးတဈဦးအလောငျးကို စတှခေဲ့ပါတယျ။
ဒီအလောငျးကိုတောငျဥက်ကလာပ ရဲတပျဖှဲ့က စံပွဆေးရုံကို ပို့ဆောငျထားခဲ့ပါတယျ။အမြိုးသမီးငယျတဈဦးအလောငျးတှကေတယျကွားတော့ ဦးသောငျးညှနျ့တဈယောကျ စံပွဆေးရုံကို လိုကျသှားခဲ့ပွီး သမီးဖွဈသူ ဟုတျမဟုတျစဈဆေးခဲ့ပါတယျ။အဝတျအစားနဲ့ သူရဲ့ ခွလေကျအင်ျဂါလေးတှေ ကွညျ့ပွီးသမီးလို့သတျမှတျပွီးတော့ အဲဒီတော့မှ သတေယျဆိုတာ တဈထဈခသြိရတာပါ လို့ ဖခငျဖွဈသူကပွောပါတယျ။
ရနျကုနျလို တဈနယျတခွားမှာ တူမဖွဈသူအသတျခံရမှုအတှကျ ဆောငျရှကျတဲ့အခါမှာ အစစအရာရာအခကျအခဲ ရှိတဲ့အပွငျ အမှုမှနျပျေါပေါကျလိုတာကွောငျ့ ဦးလေးဖွဈသူ ဦးမငျးလှငျက သူနဲ့ အဆကျအသှယျရှိတဲ့ ပငျလုံသှေးလူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ပွညျသူ့အရေးဆောငျရှကျသူမြား အဖှဲကကို ခြိတျဆကျအကူအညီတောငျးခဲ့ပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ သူမသဆေုံးမှုနဲ့ပတျသကျလို့ လှိုငျသာယာရဲစခနျးက လူပြောကျမှု ဖွားယောငျးသှေးဆောငျမှု တှနေဲ့ အမှုဖှငျ့ထားပါပွီ။